Mayelana NATHI - Dongguan Walley Machinery Technology Co., Ltd.
Insimbi CNC Machining
Izingxenye Zokulingisa ze-Die
I-Dongguan Walley Machinery Technology Co., Ltd. yasungulwa ngoJuni 2002, ezimele emnyangweni wemakethe waphesheya we-qianrunshun. Itholakala eChangping Town, eDongguan City, esifundazweni saseGuangdong, eChina. Iyinkampani enobuchwepheshe obuphakeme enekhono eliqinile eliphelele ekucutshungulweni kwezingxenye zemishini, isakhiwo sokulungiswa, ukuthuthukiswa nokukhiqizwa, kanye nokuklanywa kwe-radiator nentuthuko. Izinqubo zayo ezinkulu zokukhiqiza zifaka ukucubungula kwe-CNC ngokunemba, ukucutshungulwa kwensimbi ye-CNC, kanye nokwenziwa kwe-Stamping, i-riveting, i-assembly, njll. Imikhiqizo ihilela: ukucutshungulwa kwemishini yezokwelapha, ukucubungula izingxenye zezinto zokuxhumana, izingxenye zezimoto ukucubungula, ukucubungula imikhiqizo yezempi, izingxenye zesixhumi, i-radiator ukucubungula imodyuli nezinye izinkambu.
Ngenkonzo esezingeni eliphakeme nedumela elihle, uWally uqala ngokuqinile embonini ye-CNC ngokunemba kwemishini. Ayigcini ngokuthuthuka ekucutshungulweni kwezingxenye ezingejwayelekile, kepha futhi yenza inqubekela phambili enkulu ekucutshungulweni kwemodyuli ngokunemba, ukucutshungulwa komkhiqizo we-radiator, ukucubungula kokulungiswa kokunemba, njll.
Sihlala sinamathela esimisweni sokuhlinzeka amakhasimende ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme ngesisekelo senani elifanele. Silawula ikhwalithi yomkhiqizo ngokuhlanganisa "ukuvimbela" kanye "nokuhlola", sinikeze ubuchwepheshe bokulawula ikhwalithi obuphephile futhi obunokwethenjelwa ekukhiqizeni, ukuphelezela imishini yokunemba ye-CNC, ukucubungula ngokunemba nokugxiviza ukucubungula, bese uqedela ukuphathiswa kwakho.
Imfundo nokuqeqeshwa yindlela engcono yokuqinisekisa ukukhishwa kwamathalente. Sihlala sibamba izingqungquthela zekhwalithi kanye nemihlangano yokufunda esezingeni eliphezulu ukwenza ngcono amakhono obuchwepheshe wabasebenzi abasezingeni eliphakeme, sifunde ubuchwepheshe bamuva futhi sihlangabezane nezidingo zamakhono ezikhala ezahlukahlukene.
Ikhwalithi enhle isimilo esihle, ikhwalithi enhle ukuphishekelwa kweWally njengokuvamile!
Igumbi 816, No. 12, Changping Avenue, Changping Town, Dongguan City, Isifundazwe saseGuangdong, eChina 523570
Izinhlobo ezinhlanu eksisi machining isikhungo
Kufanele sikhethe kanjani ngokunembile ikhwalifikheyshini ephakeme ...
Liyini ikusasa le-NC machining specia ...
Ukulawulwa kwemishini nokunemba kwe-CNC lath ...
Ungakuthuthukisa kanjani ukukhiqiza kwethu kahle ...
Ungayiphatha kanjani imboni yokucubungula i-CNC kahle